boards - Synonyms of boards | Antonyms of boards | Definition of boards | Example of boards | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for boards
Top 30 analogous words or synonyms for boards
မန္တလေး နန်းတော် The Great Audience Hall was built withaspecial eye to external effect, and this object was attained by carving and gilding all the wooden parts of the roofs-except the panels between the two roofs, which were merely gilt-that is, the gables, barge-boards and eaves-boards. The carving is in low relief and consists principally ofalotus and foliage-band on the eaves-boards; the barge-boards are ornamented withaplain scroll design and surmounted by flamboyant which are very effective asadecoration. But the wealth of ornamentation is lavished on the corners of the hipped roofs and the points of the gables as well as their lower extremities. The corners of the hipped (lower) roofs are surmounted by two wooden boards, made up of several joined pieces
လေယာဉ်ပျံသန်းမှု မှတ်တမ်း ဒါပေမဲ့ ဒီမိုင်လာတိပ်တွေဟာ မီး လောင်ကျွမ်းမှု ပြင်းထန်ရင် အရည် ပျော်ပျက်စီးကြတာကြောင့် ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ မှတ် ဉာဏ်ချစ်ပ်ပြားများပါဝင်တဲ့ Solid state memory boards ပြားများ သုံးစွဲလာကြပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ United Kingdom Engineering Council (UKEC)၊ ဩစတေးလျတွင် Engineers Australia (EA)၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် American Boards of Engineering and Technology (ABET)၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် Professional Engineering Board (PEB) အစရှိသည်ကိုကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ တနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံ ကျွမ်းကျင်အင်ဂျင်နီယာ မှတ်ပုံတင်သည့် ဥပဒေလည်းမတူညီပါ။ တချို့နိုင်ငံများတွင် တချို့သောတက္ကသိုလ်တွင်များမှ ပေးအပ်သည့်ဘွဲ့ကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်၏ အမျိုးသားအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အစည်းများမှ အသိအမှတ်မပြုသည်ကိုတွေ့ရှိရတတ်သကဲ့သို့ တချို့သောနိုင်ငံများသည်လည်း၊ တချို့သောနိုင်ငံများမှပေးအပ်သည့် ဘွဲ့ကို အသိအမှတ်မပြုသည်များလည်းရှိသည်။ ဥပမာ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို ယူနိုက်တက်ကင်းတမ်းမှ ယခုချိန်ထိ အသိအမှတ်ပြုကာ၊ အမေရိကန် နှင့် စင်္ကာပူသည် ၁၉၉၂ နောက်ပိုင်း မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့များကို အသိအမှတ် မပြုပေ။ နောက်ဥပမာတစ်ခုသည် Engineers Australia သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Oxford တက္ကသိုလ်၏ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့မှလွဲ၍ တခြား ယူနိုက်တက်ကင်းတမ်း၏တခြား တက္ကသိုလ်များမှ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို အသိအမှတ်မပြုခဲ့သည်များလည်းရှိခဲ့သည်။ ထိုကိစ္စမျိုးတွက် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတော်အဆင့် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်းညှိနှိုင်းကြ ရသည်။ များသောအားဖြင်နိုင်ငံကြီးများသည် Washington Accord အရသာညှိနှိုင်းကြသည်ကများသည်။
မီယာအာကာသစခန်း [[File:Russian Mission Control Center.jpg|thumb|TsUP seen in 2007|alt=A large room with two banks of computer workstations and their operators visible. On the wall facing these workstations are three large screens displayingadiagram of an orbital ground track,aspace station crew and various other pieces of data, withalarge ticker above these screens. Advertisement boards are situated below the screens.]]